Nyocha nke 3D onye nbipute Legio site na onye nrụpụta Spanish Leon 3D | Akụrụngwa n'efu
Na nyocha a anyị ga-enyocha onye nbipute 3D na kit iji kpọkọta Legio site na onye nrụpụta Leon 3D, onye nbipute haziri ma rụpụta ya na Spen nwere obosara sara mbara ma nwee ike ibi akwụkwọ nwere ọtụtụ ihe dị iche iche.
Na weebụ anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ ndị nbipute 3D na ngwa iwu iji zukọta na ọnụahịa dị oke ọnụ. Nkọwa a na-ebelata ọnụahịa ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere nkeji ndị agbakọtara site na ụlọ ọrụ ahụ. Anyị ga-enyocha ogo ngwaahịa a site 3D ọdụm onye na-emepụta mba nke na naanị afọ 4 enweela ike inweta ahịa dị egwu nke enwere ọtụtụ ngwaahịa na teknụzụ ọhụrụ na-abanye kwa ụbọchị.
2 Akụkụ teknụzụ na nkọwapụta nke onye nrụpụta Legio sitere na onye nrụpụta Spanish Leon 3D
2.1 Ngosipụta na ahụigodo
2.2 Size, ibu, bipụta ebe na isi na-ekpo ọkụ
2.3 Inweta usoro ihe owuwu
2.4 Bipụta ọsọ na mkpebi
2.6 Njikọta, ngwa ngwa na ọrụ naanị ya
3 Akụkụ ndị ọzọ nke teknụzụ nke onye mbipụta 3D Legio de Leon 3D
4 Mgbe-sales ọrụ na nkwado site na Onye kere obodo
5 LEON 3D filament na filaments site na ụdị ndị ọzọ.
* BQ na-enye ihe mmeba iji gbakwunye akwa dị ọkụ na ndị na-ebi akwụkwọ gị. ** Original Prusa na-enye ihe ntinye abụọ.
O yiri ka ọnụ ọgụgụ nke ndị na-ebi akwụkwọ kit dị iche iche dabere na imepụta ihe eji ebipụta Prusa 3D bụ ihe na-enweghị ngwụcha. Mana mgbe anyị na-elekwasị anya naanị na ndị nwere nkwado teknụzụ, nke ụlọ ọrụ ama ama, mepụtara nke ọma. Na nke a dịruru ná njọ, na ngwa nbipute nke Leonés emeputa na-ukwuu mara mma, o nwere a ezigbo mma / ọnụahịa ruru. Imirikiti nke ọrụaka anyị na-atụ anya n'aka onye nbipute na nke ya.
Ngwaahịa Leon 3D incorporates na-ekpo ọkụ isi na «allinmetal» extruder mana, na-eburu n'uche na ọ bụ ngwa nbipute nke nwere ihe yiri prusa ma dabere na otu ngwa ahụ, anyi gaara enwe nke ngwa ngwa kwalite dika nhazi onwe ya ma obu okpukpu abuo. Anyị kwenyere na ịnye ya mmezi ndị a agaghị egosiputa mmepe dị mgbagwoju anya ruo n'ókè nke na ọ bụrụ na ndị nwe obodo nke na-eji akụrụngwa a eto onwe ha, ha ga-eju anyị anya site na itinye mmezi ndị a n'ụzọ ụlọ.
Akụkụ teknụzụ na nkọwapụta nke onye nrụpụta Legio sitere na onye nrụpụta Spanish Leon 3D
Legio dabeere n'ụdị yiri Prusa. Bụ a Onye nbipute Cartes nke nwere etiti methacrylate, ọtụtụ akụkụ ndị e biri ebi na onye nbipute ọzọ, eriri eri na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mkpụrụ na washers ijide dum.
El mgbakọ es Ee e ọ karịrị akarị gbagwojuru anya ma na-agbaso ezigbo akwụkwọ nke onye nrụpụta nwere na ọwa YouTube enwere ike mechaa n'ime 3 ma ọ bụ 4 awa. Nhazi nke ngwa nbipute na-eme ka arịọnụ siri ike ma anyị enweghị ịgbanwe n'oge ọ bụla mba akụ ngwa nbipute Na ngwa nbipute nwere elu-edu kwuchara na akụkụ ndị e bipụtara na PLA eji ya na nzuko ya ha ebibighị ma ọ bụ mbipụta mbipụta.
Isi extrusion na-agagharị na axis Z na X mgbe efere nrụpụta na-eme mmegharị ahụ metụtara axis Y. steepụ moto nke na-ebugharị ngagharị site na eriri roba maka axes X na Y. N'okwu nke z axis , iji nyekwuo nkwụsi ike na Mbipụta, ejiri 2 nzọụkwụ motors na site na iji eri na-emegharị isi elu na ala.
Ngosipụta na ahụigodo
LCD ihuenyo na njikwa bọtịnụ na-ebi n'elu n'elu na ngwa nbipute jidesie ike na etiti methacrylate n'onwe ya. Ọ bụ ezie na wiil nke na-enye gị ohere iji menu nwere mmetụ ziri ezi, otu ihe anaghị eme na mkpọchi “HOME” na “CANCEL” na ọ bụ ezie na ha na-arụ ọrụ ha n'ụzọ zuru oke, ha nwere roba, ọ bụghị nke siri ike na kwupụta mmetụta nke adịghị ike. N'ọnọdụ ọ bụla, n'ime ụbọchị iri anọ na ise nke iji ngwa nbipute ejiri mee nyocha a, anyị ahụbeghị akwa ma ọ bụ akwa ọ bụla na ha.
Size, ibu, bipụta ebe na isi na-ekpo ọkụ
Anyị na-eche ihu na nbipute ọkụ nke anaghị arọ 8 kilos, na a Mpempe akwụkwọ 200 cm3 (na usoro nke ọkọlọtọ). Ngalaba nke ndị nrụpụta zipụrụ maka nyocha gosipụtara nkwalite nke na-agbasawanye ebe a na-ebipụta akwụkwọ na 200x300x200 cm na-emesapụ aka. N'ebe a na-ebi akwụkwọ nke akụkụ ndị a, ị nwere ike ibipụta ihe ọ bụla ị ga - eche n'echeghị ka ohere ga - agbakwunye iberibe niile. Na igwe obibi akwụkwọ bụ iko ejiri sistemụ idozi ntakiri ma jide n’aka na o pere mpe ebe obibi akwụkwọ.
Usoro nsonye nke bed na-ekpo ọkụ Ọ bụ nkọwa dị mkpa ebe ọ na-agbasawanye ọnụ ọgụgụ nke ihe anyị nwere ike iji na ngwa nbipute. Iji ogo kwesiri ekwesi maka ihe obula n’ime akwa di iwe, anyị enwebeghị nsogbu nsogbu na mbipụta ọ bụla. Akwa dị ọkụ na-adị njikere ịgbakọta na-enweghị mgbado ọkụ ọ bụla. Ọ bụkwa nke magburu onwe ya mma na-ekesa oku obula n’elu elu ya dum.
Inweta usoro ihe owuwu
El larịị nke isi bu manual o mechawokwa site n'ịgbanwegharị 4 kposara dị n'otu n'akụkụ ọ bụla nke ntọala obibi akwụkwọ na site na mmiri na-enye ya ụfọdụ esemokwu dị mkpa iji nwee ike ịgbanwe. Ọ bụ ezie na azịza a zuru oke, enwere ọtụtụ usoro mmezi akpaka na ahịa (na-abụkarị site na laser ma ọ bụ sensọ capacitive) ọ ga-abụrịrị nnukwu ihe ịga nke ọma maka onye nrụpụta iji tinye otu na ọrụ onye nbipute, ọbụlagodi na ọ dị ka ngwa nke ndọtị.
Bipụta ọsọ na mkpebi
Onye nbipute nwere ike ibipụta site na obere ọsọ, gburugburu 50 mm / s ruo 250 mm / s mgbe anyị na-ebipụta ihe na-enye ya ohere, dị ka PLA ma ọ bụ ABS. Na ọsọ ọ bụla anyị na-eji, obibi bụ ọ kwụsiri ike ma ghara inwe mkpọtụ, n'ezie site na ihe nkwado methacrylate Kedu nke na-eme n'etiti etiti na uzo kwụ ọtọ.
N'ime ihe ngosi mbụ anyị hụrụ ụfọdụ nkewa n'etiti ọkwa na anyị enweela ike ịchọpụta na profaịlụ nke akụrụngwa nke ihe akwadoro maka Slic3r usoro ahụ dị n'okpuru 100%, na-emetụ uru a ka anyị nwetara ihe siri ike karị.
Nke kacha mma oyi akwa Z mkpebi na a ga-enweta na a na ngwa nbipute Igwe okwu 50, a karịa ezigbo mma mana na anyị ga-eji obere ihe ụbọchị ọ bụla nke ngwa nbipute ebe ọ bụ na anyị na-ahọrọ mkpebi maka, ịchụrụ ntakịrị nkọwa nke mmecha ahụ, ga-enyere anyị aka mezue ngwa ngwa ngwa ngwa.
El onye mmeputa ahọpụtara maka ndị nrụpụta ihe a onwe mmepe "allinmetal" nke ị kpọrọ LEONOZZLE V2. Typesdị ndị a na-enye ezigbo nsonaazụ, agbanyeghị ihe ahọrọ ma n'oge na-adịbeghị anya, ha abụrụla ndị ama ama n'obodo Onye kere ha. Ihe mmeputa mmeputa “allinmetal” bu onye na emeputa ihe siri ike nke nwere ike ịpụta ụdị ihe niile, Anyị emeela ka ọ na-emeso ihe dịgasị iche iche nke filaments dịgasị iche iche dị iche iche na-arụ ọrụ na ọ nwere ike ijikwa ihe niile na-enweghị nsogbu. Emeputa na-ekwu na ọ bụ ike ibipụta 96% nke ihe na ahịa, dika anyi enweghi ike ichota nsogbu obula 4%.
Onye a na-emeputa ihe na-etinye wiil abụọ na usoro ịpị iji pịa filament ahụ, si otú a na-ahụ na ikike ịdọ aka na onye na-eme ihe ahụ ga-ezu maka ihe ọ bụla. Ekene nwere ike iru okpomọkụ nke ruru 265º C nsogbu adighi, nke anyi lere anya mana anyi ahughi ihe obula choro ya.
Njikọta, ngwa ngwa na ọrụ naanị ya
El emeputa na-adụ ọdụ ka ya na onye ọrụ Repetier nọ na-arụ ọrụ nke mejupụtara n'ime na-eji Slic3r laminator. Iji kwado ọrụ a Na weebụsaịtị ya anyị nwere ike ibudata ma profaịlụ nke onye nbipute na nke ihe niile kachasị dị na ya. Nkọwapụta nke ihe ndị ahụ na-egosi ma anyị agaghị echefu na onye nbipute ọ bụla nwere ike ịnwe obere ọdịiche na ọnọdụ nke okpomọkụ na nrugharị nke ga-ahazi iji nweta mbipụta kachasị mma. Anyị na-adụ gị ọdụ ka ibipụta ule ma ọ bụ ihe dị mfe nwere ntọala dị iche iche iji bulie profaịlụ maka ndị na-ebi akwụkwọ gị.
N'otu oge Ozugbo a na-ebufe faịlụ GCODE na SD na ngwa nbipute, ọ nwere ike ịrụ ọrụ kpamkpam. Mana ọzọkwa webatara ọdụ ụgbọ USB nke mere na anyị nwere ike jikọọ ya na PC anyị ma na-achịkwa ya nke ọma. ihe nbipute o nweghi wifi, ethernet ma obu Bluetooth, Ọ bụ ezie na isi ihe a bụ ihe anyị nwere ike idozi mgbe niile site na iji ngwa ntụ nke anyị tinyegoro Octoprint. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka anyị nyefee otu isiokwu ịkọwa n'ụzọ zuru ezu otu esi eme mgbakwunye a, gwa anyị na nkwupụta ahụ!
El femụwe nke ngwa nbipute bụ Spanish ma na-enye anyị ohere ịrụ ọrụ ndị a na-ahụkarị. Mgbe ị na-eme nchọgharị na menu anyị na-atụfu ohere ịkagbu arụmọrụ na-emezughị ya. Ngwaọrụ ahụ na-etinye ohere nke ịgbanye ma ọ bụ gbanyụọ ọkụ mana anyị ahụbeghị na akwụkwọ nbipute na enwere ike.
N'oge ibi akwụkwọ na ngosipụta a na-agwa anyị akụkụ ndị kachasị mkpa, dịka n'oge ndị ọzọ anyị kwesịrị ịgwa anyị oge fọdụrụ iji mechaa mbipụta akwụkwọ a na-aga n'ihu. Ọzọkwa anyị nwere ike gbanwee akụkụ niile metụtara okpomọkụ, ọsọ na ihe onwunwe erubaNa nkọwa a, anyị ga-enwe ike ịhazigharị akụkụ ndị a ma ọ bụrụ na anyị edebe iwu ọ bụla nke a ga-edozi.
Site na menu anyị ga-enye iwu ka onye nbipute iji dozie akwa ahụ, mana enweghi ike ịhazigharị ihe eji eme ihe eji sọftụwia.
Akụkụ ndị ọzọ nke teknụzụ nke onye mbipụta 3D Legio de Leon 3D
Enwere ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ na agbanyeghị na anyị enweghị ike ịkpọ njirimara ọrụaka metụtara ọrụ kwesịrị ekwesị nke ngwa nbipute ma ọ masị anyị ịtụle ha dị ka ihe dị mkpa. Anyị ga-enyocha ụfọdụ nkọwa nke ngwa nbipute nke, ọ ka mma ma ọ bụ nke ka njọ, dọọrọ uche anyị.
Otu ihe nke Legio pụtara ìhè ma e jiri ya tụnyere ngwa ndị ọzọ na-arị elu bụ na O nweghi eriri na anya, niile na-ji aghụghọ zoro, ọbụna okirikiri nke ngwa nbipute bu zoro n'azụ efere methacrylate, nkọwa a na-enye onye nbipute ezigbo mma. N’ụzọ dị mfe, onye nrụpụta ahụ ejisie ike mee ka ọ bụrụ ọkachamara na kit ahụ ruo n’ókè nke na n’anya onye nke atọ, ha ga-enwe obi abụọ na anyị agbakọtawo ya n’onwe anyị.
Otu akụkụ nke anyị na-atụ anya na onye nrụpụta ga-akawanye mma na nyocha ndị ga-eme n'ọdịnihu bụ nsonye nke ọkọlọtọ njikọ maka eriri ike. Ugbu a ọ dị kpọmkwem na ike ọkọnọ. Usoro dị ugbu a dị mma ma ọ bụrụ na anyị ejiri eriri ahụ n'ụzọ ziri ezi mana eriri USB nke PC (IEC njikọ) nke enwere ike ịdenye ma wepụ ya site na ngwa nbipute na-adịkarị mma. Ọzọkwa nnabata ihe agbanyụrịrị ga-atọ ụtọ. Ọ bụ eziokwu na na-abaghị uru oriri nke na ngwa nbipute adịghị ukwuu karịa nke telivishọn na-eguzo-ma ọ bụ mma na dị mfe iji mejuputa ma dị mkpa n'ihi na ụfọdụ ndị ọrụ.
Ma anyị bụ ndị na-eme! Karịa nsogbu, ọ bụ ọrụ mbụ maka igwe obibi akwụkwọ anyị. Obere nnweta ma na-adọta ebe nchekwa na-agaghị agwụ agwụ nke Thingiverse ọ dị mfe ịchọta mgbanwe imeghari ka onye nbipute a. You kwetara ihe ịma aka ahụ?
na ọrụ na-agwụ Ha na-abụkarị ihe dị nro nke ndị na-ebi akwụkwọ mgbe ha na-anata oge ọ bụla anyị bipụtara mmetụta nke ụgbọ elu ndị na-apụ apụ, ọ na-abụkarị maka ha ịkwaga ma ọ bụ ịtọpụ eriri, iji dozie nsogbu a onye nrụpụta nwere ha ike n'ime Ọdịdị nke ụfọdụ akụkụ. Ruo n'ókè nke na ha lere ha anya.
Ihe ọzọ anyị masịrị anyị bụ na ọ bụ otu n'ime ndị na-ebi akwụkwọ ole na ole anyị hụtụrụla na ha mechara kpebie ịmegharị ahụ usoro microSD maka kaadị nke anyị na-ewebata faịlụ Gcode ka ebipụta, a ịmata ihe zuru ezu ga-ekwe ka anyị na-eme na-enweghị usoro nkwụnye. Na mgbakwunye, onye nbipute na-abịa na kaadị 8 GB nke anyị nwere ike ịchekwa ọnụ ọgụgụ dị ukwuu iji bipụta.
N'ikpeazụ na ngalaba a, kwuo okwu na, ịbụ onye nbipute mepere emepe, ọ bụ mkpọtụ na-eme mkpọtụ dị ka ihe niile na-enweghị igbe mpụga na-eme ka ụda ahụ daa ụda. Ọ bụghị mkpasu iwe ka ịhapụ ụlọ ebe akụrụngwa dị ma atụla anya na ị ga-enwe ike ịhapụ ya na-ebi akwụkwọ ma ọ bụrụ na mmadụ ezube ịrahụ ụra n'akụkụ.
N’ikpeazụ, otu onye na-emepụta ihe ghọtara na ụzọ kacha mma anyị ga-esi achọpụta na mbipụta ya adaala bụ iji anya na-atụka akụkụ anyị na-adịghị mma na ndị ọzọ na-emejọ ihe ma depụta ihe ndị anyị mejọrọ. La Nduzi nsogbu nsogbu nke emeputa bu otu n'ime mma ụdịdị na anyị zutere ugbu a nke mere na ndị na-amalite n'ime ụwa dị mgbagwoju anya nke mbipụta 3D ike ibipute mma ihe na-enweghị njehie.
A họpụtara Legio nke onye ọrụ Spanish bụ Leon 3D ka ọ bụrụ onye nrụpụta ọrụ nke ebe agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ nke Xunta de Galicia na ụlọ ọrụ BIT nke Junta de Castilla y León. Eziokwu a nyere ya a nnukwu njirimara nke nwere olile anya na mmepe na mmepe nke ngwa nbipute ebe ọ bụ Open Source. Ọ bụ ezie na maka ugbu a anyị ahụbeghị ọtụtụ ozi ma ọ bụ mgbanwe na imewe n'èzí ndị ọrụ gọọmentị nke ika ahụ. Ikekwe ọ ga-abụ ihe na-akpali mmasị maka onye nrụpụta ka ọ tinye usoro ọgbakọ gọọmentị nke iji mee ka obodo ahụ zukọta, dozie nsogbu nwere ike ibilite n'iji ngwaahịa ha rụọ ọrụ ma bụrụ njikọ n'etiti ụlọ ọrụ na ndị ahịa.
Emeputa nwere magburu onwe mgbe-sales ọrụ con ndị ọkachamara nwere ihe ọmụma dị ukwuu nke akụrụngwa gị yana otu esi enyere aka dozie nsogbu ọ bụla nwere ike ịda. Nke a bụ nkọwa dị oke mkpa maka ọtụtụ ndị ọrụ na onye nrụpụta chọrọ ka ọ bụrụ otu n'ime ube iji gosipụta ngwaahịa ya karịa nke asọmpi ahụ.
LEON 3D filament na filaments site na ụdị ndị ọzọ.
Na ngwa nbipute, na emeputa nyere anyị a eriri igwe nke Ingeo PLA filament na Yellow agba. Na PLA filament ahịa site na onye nrụpụta bụ filament nke ezigbo mma, Ọ dị mfe ibipụta na ezigbo adhesion ma akwa ụlọ na n'agbata ọkwa.
El osisi filament ọnọ site emeputa nwetara ezi Mbipụta mgbe agba na imecha mana ọ pụtaghị na ọ gụnyere ọdịnaya dị elu nke ihe osisi. N'adịghị ka osisi filaments nke ndị nrụpụta ndị ọzọ, ya njirimara ọrụ nka dị nso na nke PLA karịa nke DM Nke a na-eme ka obibi akwụkwọ dịkwuo mma ma na-emezi mkpebi nke iberibe ego na-efu obere ihe nha anya na aka na isi (ọ naghị esi isi ka osisi).
El PETG filament na emeputa nwere na ya katalọgụ nwere a nghọta dị elu, dị nnọọ mma mgbanwe na a nrụgide dị elu. Agbanyeghị, maka ndị na-ejitụbeghị ihe a, anyị na-adọ gị aka na ntị na ọ dịghị mfe ịnweta echiche dị mma. Have ga-egwu ọtụtụ ihe na mmiri na okpomọkụ ruo mgbe ị nwere ike ịhazigharị ihe kachasị mma ma nsonaazụ ya ga-adabere ọtụtụ na mgbagwoju anya nke ihe ahọrọ.
Onye nrụpụta ọrụ nwere nkwekọrịta ya na ụlọ ọrụ Leroy Merlin iji nye ngwaahịa gị. Nke a na-eme ka ọ dịrị anyị nfe ịlele anya nke ọma ihe eji ewu ngwaahịa gị. Ha nwekwara a ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na nke ha na-ere ha dum katalọgụ na anyị nwere ike ọbụna ịhụ ha na Amazon.
El ọnụahịa gọọmentị nke ngwa nbipute bu 549 € Ọ bụrụ na anyị họrọ isi 200 × 200 obibi akwụkwọ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ogologo 200 300 long 100, ọnụahịa na-arị elu € XNUMX. A ghaghi iburu n'uche na n'ime uzo abuo a na-ebiputa akwukwo nwere akwa di oku.
Ọ bụrụ n ’ịnwa anwa ịchịkọta ngwa nbipute onwe gị, mana ịchọrọ a ngwaahịa a nwalere nke ukwuu yana nkwado mgbe ahịa gasịrị n'aka ndị na-emepụta ihe ị na-eche nhọrọ dị mma. Mgbe ị na-ere ahịa na ebe Leroy Merlin, ị nwere ike ịgafe nke ị nwere nso ma pụọ ​​na onye nbipute n'okpuru ogwe aka gị, ọ bụ ezie na n'akụkụ a, anyị na-ahọrọ mgbe niile ịmekọrịta onye nrụpụta ozugbo, ọbụlagodi na nke ahụ pụtara ụgwọ mbupu na ịnwe ụlọ maka nnyefe.
The Legio si Spanish emeputa Leon 3D nwere a Nnukwu uru maka ọnụahịa ahụ ọ ga-enye gị ohere ịrụ ọrụ na imerime akụrụngwa anyị nwere ike ịchọta n'ahịa na-eji ụdị mbipụta dị ịrịba ama. Ebe ọ bụ akụrụngwa a haziri nke ọma, anyị ga-enwe ike ibipụta ọtụtụ awa tupu anyị arụkwa ọrụ ọ bụla.
Anyị nwere obi ụtọ iji ngwaahịa a ma anyị nwere olile anya na onye nrụpụta ga-aga n'ihu na-eme ka KIT rụọ ọrụ iji gbanwee ngwaahịa dị ịrịba ama ka ọ bụrụ nke ọma.
Dị ka nchịkọta na nke mere na ị pụrụ ịhụ otú a ngwa nbipute-arụ ọrụ na-efegharị, anyị na-ahapụ gị obere vidiyo nke ị nwere ike nyochaa ihe niile a tụlere n'isiokwu a:
Ezi adhesion ekele na akwa kpụ ọkụ n'ọnụ
Nduzi njehie n'ịntanetị nke na-ahụ anya na nke nkuzi
Little ghọrọ femụwe
Ọdụdọ ndị nwere eriri ozugbo na isi iyi
Enweghị ike mgba ọkụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Nkọwa 3D » Nyocha nke onye ebi akwụkwọ 3D Legio site na onye ọrụ Spanish bụ Leon 3D
Enwere m Legio ruo oge ụfọdụ ma enwere m obi anụrị na ya. Ọ dị mfe iji ma dị mfe ilekọta. Nkọwapụta mbipụta nke onye na-ere na weebụsaịtị ha nyere aka kwalite ịrụ ọrụ na ihe dị iche iche.
Enwere m mmasị na onye na-ebi akwụkwọ Legio 3D, m ga-achọ ịmatakwu banyere ya, ọnụahịa, ụlọ ọrụ ịkwụ ụgwọ, faịlụ iji bipụta ma nyere aka maka njikwa ya, yana ọnụahịa nke akụkụ ahụ mapụtara na profaịlụ mbipụta dị iche iche.
Anam ekene m gi tupu sss
Zaghachi Manuel Sánchez Legaz